A ga-emezigharị ụlọ ahịa Apple na Fifth Avenue na Nọvemba n'afọ ọzọ | Esi m mac
Na mbido afọ a, Apple mechiri ụlọ ahịa Apple echepụtara dị na Fifth Avenue na New York iji mepụta usoro mmezigharị dị mkpa nke oghere maka ọhaneze ga-esi site na ụkwụ 33.000 dị ugbu a karịa ihe karịrị 77.000, ihe karịrị okpukpu abụọ. Tụkwasị na nke a, Apple ga-agụnye ụlọ redio ka ndị isi Beats DJs nwee ike ịkpọ egwu ha kachasị amasị na mgbakwunye na ịme mkparịta ụka na ndị na-abụ abụ kachasị mkpa ma ọ bụ ìgwè dị iche iche nke oge ahụ. Oge edokwa maka nraranye nke mmezigharị a bụ maka njedebe nke Ọktọba 2018, mbido ọnwa Nọvemba, tupu ajọ ifufe nke Krismas amalite.
Na-egbu oge n'ọrụ ndị Apple rụrụ na parsimony nke ọ na-ewe ma mgbanwe na nrụpụta ọhụrụ ahụ, aghọwo ebe nkịtị maka Apple, Anyị amaghị ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ijide oge niile ọbụlagodi obere nkọwa, ma ọ bụ n'ihi na ọ na-eji ndị ọrụ pere mpe enwere ike, mana oge ọ na-ewe iji rụọ ọrụ na mgbanwe dị ịtụnanya. Iji mezuo ọrụ ndị ahụ, a manyere Apple iwepụ iko iko iko dị na elu nke na-enye ohere ịnweta akụrụngwa ahụ.
Nke a akụkọ ifo cube hụrụ ọnụ ọgụgụ nke kristal iberibe na ọ mejupụtara belatara na-aga site na mpempe akwụkwọ 90 ka ọ bụrụ naanị 15. Cube ga-alaghachi n'elu ụlọ ọrụ tupu ya arụchaa ọrụ ahụ. Ihe anyị na-amaghị bụ ma Apple ọ ga-erite uru na ndozigharị iji belata ọnụ ọgụgụ kristal mebere cube a. Ime nke Applelọ Ahịa Apple a ga-ahapụ ọkwa ọhụrụ nke Apple na-etinye n'ọrụ na Apple Store ikpeazụ, ebe osisi ghọrọ ihe kachasị eji eme ihe mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » A ga-emezigharị oflọ Ahịa Apple na Fifth Avenue na Nọvemba n'afọ ọzọ
Keyboardfọdụ ụzọ mkpirisi igodo iji mee ihe na Finder (II)